Waxay ka dhalatay qoys u damqada dadkooda, balse waxaa loo dilay sidii aabaheed | Somsoon
Home WARAR Waxay ka dhalatay qoys u damqada dadkooda, balse waxaa loo dilay sidii...
Waxay ka dhalatay qoys u damqada dadkooda, balse waxaa loo dilay sidii aabaheed
Almaas Elman Cali Axmed oo ka tirsaneyd qoyska caanka ah ee reer Elman ayaa ku geeriyootay gudaha xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho, kadib markii loola cararay Isbitaal ku dhex yaal xarunta.
Almaas ayaa waxaa ku dhacday xabad, inkasta oo aysan weli ka caddeyn, haddana waxaa wararka intooda badan ay sheegayaan inay ahayd xabad si kam ah ugu dhacday oo aan la aqoon halka ay ka timid.
Si kastaba, Almaas ayaa amrkii xabadda laga soo saaray, waxay noqotay xabad ka mid ah rasaasta ciidamada Amisom, sida ay dad ku sugan Xalane ay noo xaqiijiyeen
Wali ma cadda in xabadda laga dhex riday xarunta Xalane, iyo inay banaanka ka timid, hase yeeshee markii ay xabadda ku dhacday waxay saarneyd gaari dhex socday xarunta Xalane, waxaana xabadda ay kaga timid dhinac dambe ee gaariga oo NOAH ahaa.
Weli waa socda baaritaan ku aadan sida ay wax u dhaceen iyo sababta loo dilay Almaas, waxaana baritaanadaas wada saraakiisha AMISOM ee Xalane ku sugan.
Almaas ayaa horey u ahayd xoghayahii koowaad ee safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Kenya, waxayna waayihii dambe ka tirsaneyd hey’adda Elman.
Allaha u naxariistee Almaas ayaa la dhalatay Ilwad Elman oo ka tirsan shaqaalaha Qaramada Midoobey, taas sanadkaan u tartamaysa biladda nabadda Aduunka iyo Iman Elman oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Hadaba aan dib u milicsanno in yar oo ka mid ah Taariikhda qoyska caanka ah ee reer Elman:
Sanadkii 1996-kii ayaa magaalada Muqdisho lagu dilay Elman Cali Axmad, isagoo ka shaqeynaya arrimaha Nabadda halku dhigna waxaa u ahaa “Qoriga dhig Qalinka Qaado” xilli adag dagaallo sokeeye ay socdaan isagoo dhalinyarada ka aruurin jiray wadooyinka Muqdisho oo geyn jiray goobo waxbarasho.
Inta badan caruurtiisa oo hablo badan ayaa u istaagay iney ka dhabeeyaan rajadii Aabahood waxaana kamid ah Almas Elman oo maanta lagu dhex toogtay xarunta Xalane oo amnigeeda gacanta ku hayaan ciidamo shisheeye oo isugu jira Cadaan iyo Madoow, waxeyna la shaqeyn jirtay hay’adaha Soomaaliya caawiya sida Qaramada Midoobey iyo kuwa arrimaha Bini’aadanimada.
Elwad Elman oo aad looga yaqaano Soomaaliya ayaa ka mid ah curuurta Elman Cali oo arrimaha Bini’aadanimada ka shaqeysa, mashruucyo badan oo faa’ido lehna u hergelisay dhalinyaro ku nool dalka oo xaalado nololeed heysatay, Elwad ayaa horay dhowr biladood ugu heshay ka shaqeynta Nabadda.
Sidoo kale waxaa jirta Iimaan Elman oo iyana ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, gaar ahaan Militeriga, waxeyna Iimaan hormuud u tahay howlaha nabadgalyo ee lagu soo dabaalayo dalka, u doodista xuquuda haweenka ayey sidoo kale caan ku tahay Iimaan.
Fartuun Cabdisalaan Xaaji Aadan waa hooyadooda seddaxdaas gabdhood ee aan soo xusnay magacyadooda, kama marna dadaalka lagu bixinayo dib u dhiska Soomaaliya, waxayna laf dhabar u aheyd dadaalada ilmo Elman, waxayna haatan qeyb weyn ka tahay Fartuun howlaha hay’adda Elman ay ka wado dalka, waxayna hey’adaas ka shaqeysaa danaha danyarta Soomaaliyeed.
Article horeMadaxweyne Xasan Sheikh oo ka war bixiyey kulankii ay Farmaajo kula yeesheen Villa Somalia, Daawo
Article socoda Somali-Canadian Peace activist Somali Canadian shot dead in Mogadishu